Akụkọ banyere ọkọlọtọ Morocco | Njem zuru oke
Akụkọ banyere ọkọlọtọ Moroccan
Obodo Morocco | | Morocco
Ọtụtụ ọkọlọtọ nke ụwa anyị bi na ya nwere akụkọ ntolite pụrụ iche na, oge ụfọdụ, na-atọ ụtọ nke na ọ na-esiri anyị ike ikwenye mmekọrịta dị n'etiti mba ndị o doro anya na ha ekwesịghị inwe. mmekọrịta nke ghọrọ akụkụ nke ọkọlọtọ ha.
1 Nkọwa nke ọkọlọtọ Moroccan
2 Ọkọlọtọ akụkọ ihe mere eme nke Morocco
2.1 Nga Arabian
2.2 Ọkọlọtọ arabic ndị mbụ
2.3 Ọkọlọtọ ọcha
2.4 Ọkọlọtọ Moroccan n'oké osimiri
3 Ọkọlọtọ ndị agha Morocco
3.1 Ndị nche eze
3.2 Ndị agha mmiri
4 Ọkọlọtọ Royal nke Morocco
4.1 Na 70 '
4.2 Ọkọlọtọ dị ugbu a
5 Ọkọlọtọ na ọta nke mba Moroccan
5.1 Uwe agha nke Egypt
Nkọwa nke ọkọlọtọ Moroccan
Na emepechabeghị, n'oge ọdịda anyanwụ ọdịda nke Ndị agha Alakụba n'ofe Africa, e guzobere ọdịnala ndị metụtara ọkọlọtọ bụ́ ndị nọgidere na-emetụta ọkọlọtọ ndị a na-eji eme taa. Iji maa atụ, ndị agha Alakụba kwadoro ndị a nnukwu ihe siri ike acha Flag flags nke metụtara ụfọdụ usoro ndị eze. Ejiri ihe ịchọ mma na / ma ọ bụ ihe odide sitere na Koran kpuchie ubi nke ọkọlọtọ.
Uhie na Akara Sọlọmọn (kpakpando na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ise). Ọ bụ otu n'ime ọkọlọtọ uhie Arabia, ọ bụ ezie na Morocco dị anya na Emirates.
Kpakpando na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ise nke na-egosi na ọkọlọtọ mba nke Morocco na-akpọkarị akara nke Solomon. Enwere ike ịpụta mmalite ya na Alaeze Ukwu Babilọn, c. N'afọ 2000. Pentagram ọ nwere ike ịnọchite anya chi nwanyị Ishtar, nke ndị Alakụba jikọtara na Fatima, ada nke onye amụma.
Na ọkọlọtọ morocco, pentagram ahụ na-egosi mmekọrịta dị n’etiti Chineke na mba ahụ. Cheta na Islam bu okpukperechi ndi ala na Morocco na eze, onye sitere na nkpuru nke onye amuma, bu aha ndi isi nke ndi kwere ekwe.
Akpa ọkọlọtọ ga-ebulite na Morocco Ọ bụ ọkọlọtọ nke usoro ndị eze Idrisid na 788, ndị a maara dịka ndị nna nke steeti ma ọ nwere mpaghara ọcha dị mfe.
Ọkọlọtọ akụkọ ihe mere eme nke Morocco
na mbụ biri na Morocco Ha bụ ebo Berber na-awagharị awagharị. Ndị Finishia guzobere akụkụ na ụsọ oké osimiri gburugburu narị afọ nke iri na abụọ BC wee hiwe Carthage (nke bụzi Tunisia). Ndị Rom bibiri Carthage na 12 BC, mana Romanization nke Morocco ka siri ike. Na 146, ndị Vandals wakporo Spain site na Morocco, nke mechara tinye na Alaeze Ukwu Byzantine nke Justinia na 429.
Ọkọlọtọ arabic ndị mbụ
Na mbido narị afọ nke asatọ, onye Arab Arab Musa Abụ Nosayr jidere Tangier, guzobe gọvanọ n’obodo ahụ, wee mee ka Islam banye Morocco. Ndị Berbers ghọrọ ndị Alakụba, mana ha nupụrụ isi na 740 wee hiwe ọchịchị ndị nweere onwe ha na Ugwu Rif.
Ojiji nke ọkọlọtọ morocco dị ka ihe nnọchianya nke ụbọchị laghachi na usoro Almoravid (1062-1125 AD). Tupu oge aacha ọcha, ọkọlọtọ silk a na-ebukarị ha n’agha, mgbe ụfọdụ na-ede ihe odide Koran. Almoravids guzobere omume a. Ha nyere ọkọlọtọ maka otu nke otu narị ndị agha; ndị isi mgbe niile na-ebu ihe edere: "Ọ dịghị chi ma Chineke na Muhammad bụ onye amụma ya". Ọchịchị abụọ ọzọ sochirinụ (ndị Merinides na Saadiens) gara n'ihu n'iji ọkọlọtọ ọcha dị ka akara nke steeti.
Ọkọlọtọ Moroccan n'oké osimiri
Ọkọlọtọ na-acha uhie uhie na pentagram na-acha akwụkwọ ndụ na okpueze odo n'otu akụkụ. E gosipụtara pentagram buru ibu karịa na ọkọlọtọ mba, enweghị mgbagha na nke a bụ n'ihi nsogbu ọhụhụ na emeziri ya ka ọ dị na ọkọlọtọ ụgbọ mmiri. N'aka nke ọzọ, ọkọlọtọ ejiri na agha ndị nọ na mmiri, gụnyere okpueze eze n'otu akụkụ nke ọkọlọtọ ahụ, agbanyeghị na site na 1990, agbakwunyere ụdị akara ndị ọzọ.
Ọkọlọtọ ndị agha Morocco
Ndị nche eze
Ọkọlọtọ nke Royal Guard Ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke nwere kpakpando na-acha edo edo edo edo edobere n'etiti etiti ọkọlọtọ yana kpakpando ọhụụ na kpakpando na n'akụkụ ọ bụla nke ọkọlọtọ.
Red ọkọlọtọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ise n’etiti na okpueze na-acha odo odo anọ, otu na nkuku ọ bụla.
Ọkọlọtọ Royal nke Morocco
Na 70 '
La ọkọlọtọ eze bụ ọkọlọtọ triangular na-acha uhie uhie nwere oke odo nwere akụkụ ya na-enweghị onwe ya na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ise na-acha edo edo edobere n'etiti etiti ọkọlọtọ. Ọkọlọtọ a bụ ọkọlọtọ ọkọlọtọ nke Hasan II ji (1961-1999).
Ọkọlọtọ dị ugbu a
Ugbu a, n'ime ụwa n'ezie, a ọkọlọtọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na uwe nke ogwe aka n'etiti.
Ọkọlọtọ na ọta nke mba Moroccan
Uwe agha nke Egypt
Uwe nke ogwe aka nke Morocco A nabatara ya na Ọgọstụ 14, 1957 ma gosipụta ọta na-acha ọbara ọbara nke nwere ọwụwa anyanwụ, Ugwu Atlas, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Pentagram. gụọ "ee. ị na-enye Chineke otuto, ọ ga-enye onwe ya otuto» n'asụsụ Arabik dị n'okpuru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Akụkọ banyere ọkọlọtọ Moroccan
Kpakpando ahụ bụ ụgha kpamkpam, kpakpando ahụ nọchiri anya isi okwu nke ọ bụla, ya bụ, ekpere ise nke ụbọchị ndị Alakụba na ụcha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Islam.
Zaghachi ka iliass
luciano padilla garcia dijo
N'eziokwu, onye Alakụba gwara m, mana echetaghị m, ihe ekpere ise a pụtara, naanị m na-echeta na otu isi nke kpakpando ahụ, pụtara ọrụ nke ndị Musumans kwesịrị inye akụkụ nke uru ha nye ndị nọ ná mkpa, enweghị ihe ọzọ, ekele.
Zaghachi luciano padilla garcia
Ọkọlọtọ na-acha uhie uhie. Ọ pụtara ike, obi ike na nraranye na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ agba nke Islam nyere ya na kpakpando pụtara ogidi 5 nke Islam. Akaebe okwukwe. Ekpere. Ibu Ọnụ Nye onyinye ma gaa Mecca (naanị onye nwere ike). Akara nke solomon bụ (n'aha chi mesaya) ihe o degaara eze nwanyị nke sheba. Daalụ
Liana sanchez dijo
Kedu ihe na-adọrọ mmasị na akụkọ ihe mere eme nke Morocco na m nwere mmasị na ịnọgide na-achọpụta ihe na-adọrọ mmasị na karịsịa, akụkọ anwansi nke mba a, ọdịbendị ya, ọdịnala na ọdịnala ya, n'ihi na ebumnuche m bụ ịga ya.
Zaghachi Liana Sanchez
Nke nwoke dijo
Enweghị ihe akaebe na Eze Morocco bụ nwa nwa nke onye amụma ma ọ bụ nke ezinụlọ ya na nke a gosipụtara nke ọma na omume nke monadic9 ma ọ bụ eze ihu abụọ.
Ismale, ọ bụrụ na enwere ihe akaebe, enwere nnukwu atụmatụ nke ezinụlọ onye amụma na ụmụ ya na ọ na-edekọ ndị a na-amụ ruo ugbu a, na eze Morocco bụ nwa nke onye amụma
Faviola si na Santiago dijo
Liana, enwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta, tupu ị gaa mba ọzọ dị iche. Ọ mara mma ma na-amụkwu ihe tupu oge eruo
Zaghachi Faviola de Santiago